१ बर्ष देखि अस्पतालमा श्रीमती अनिताको उपचार गर्दै आएका बिनोदलाई भिख मागेर उपचार गर्ने भन्ने आरोप लागेपछि, बिरामी अनिता रोईंन – AB Sansar
November 21, 2020 santoshLeaveaComment on १ बर्ष देखि अस्पतालमा श्रीमती अनिताको उपचार गर्दै आएका बिनोदलाई भिख मागेर उपचार गर्ने भन्ने आरोप लागेपछि, बिरामी अनिता रोईंन
अस्पतालमै भाइटिका लगाउँदाको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो । उनको भिडियो देखेकी नायीका तथा कलाकार एलिजा गौतम पनि अस्पतालमा सहयोग लिएर पुगेकी छन् । भिडियो निकै भाइरल भएपनि उनीहरुलाई सहयोग भने धेरै नआएको अस्पतालमा पुगेपछि थाहा पाएको एलिजाले बताएकी छन् । उनीहरुलाई सानो सहयोग लिएर एलिजा पुग्दा भाउजुको स्याहार गर्न बसेका नन्दहरु पनि निकै रोएका थिए
पानीजहाज कम्पनी खोल्न आवश्यक छैन : माधव नेपाल !!
तिहारमा बालेको मैनबत्तीबाट आ’गो स’ल्केर बाबुकै आँखा अगाडि गयो छोरीको ज्या न !
हेर्दा हेर्दे घरसँगै छोरा बुहारीलाई बगाएपछि रुन कराउन थाले खगेन्द्र